Soo Saaraha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Tiknoolojiyad tayo sare leh & horumarsan - Ever-Power
Taariikhda Dhaqan galka ah: Ogast 1, 2017
Ogeysiiskan asturnaanta wuxuu shaaca ka qaadayaa waxyaabaha qarsoodiga u ah EVER-POWER GROUP CO., LTD. iyo degelkeenna: https://www.ever-power.net. Ogeysiiskan asturnaanta wuxuu khuseeyaa oo keliya macluumaadka ay soo ururisay degelkan, marka laga reebo halka lagu sheegay si kale. Waxay kuu sheegi doontaa waxyaabaha soo socda:
Waa maxay macluumaadka aan ururinno;
Cidda lala wadaagayo;
Sidee loo sixi karaa;
Sidee loo hubiyaa;
Sidee loola socodsiinayaa isbeddelada siyaasadeed;
Sida wax looga qabto tabashooyinka ku saabsan ku takrifalka xogta shaqsiyeed.
Information Collection, Isticmaal, oo Sharing
Annagu waxaan nahay milkiilaha kaliya ee macluumaadka ku soo uruuriyay bartan. Waxaan helnaa oo keliya marin u helitaanka / soo aruurinta macluumaadka aad si tabaruc ah noogu siiso emayl ama xiriir toos ah oo adiga lagaa helo. Kama iibinayno ama u kiraysan doonno macluumaadkan qofna.
Waxaan u adeegsan doonaa macluumaadkaaga si aan kaaga jawaabno, oo ku saabsan sababta aad noola soo xiriirtay. Ma la wadaagi doonno macluumaadkaaga cid saddexaad oo ka baxsan ururkeenna, marka laga reebo inay lagama maarmaan tahay in la fuliyo codsigaaga, tusaale ahaan, in la raro amar.
Haddii aad na weydiiso in aan, waxaa laga yaabaa in aan kula soo xidhiidhi via email mustaqbalka in uu kuu sheego oo ku saabsan gaar ah, wax soo saarka ama adeegyada cusub, ama isbedel ku Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this.
Helitaanka iyo Xakamaynta Macluumaadka
Waad ka bixi kartaa xiriir kasta oo aad nagala sameyso mustaqbalka waqti kasta. Waxaad ku samayn kartaa waxyaabaha soo socda wakhti kasta adoo nala soo xiriiraya adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka ama lambarka taleefanka ee lagu bixiyo degelkeenna:
Eeg macluumaadka aan kaa hayno, haddii ay jiraan.
Isbeddel / saxi macluumaad kasta oo aan kaa hayno.
Ma nadiifin wax macluumaad ah oo aan kaa hayno.
Muuji walaac kasta oo aad ka qabto isticmaalkaaga xogtaada
Si loo isticmaalo websaydhkan, adeegsadehu waa inuu marka hore buuxiyaa foomka diiwaangelinta. Inta lagu jiro diiwaangelinta waxaa loo baahan yahay isticmaale inuu bixiyo macluumaad gaar ah (sida magaca iyo cinwaanka emaylka). Macluumaadkaan waxaa loo isticmaalay inuu kula soo xiriiro waxyaabaha ku saabsan badeecadaha / adeegyada boggayagaad ku muujisay inaad xiiseyneyso. Xulashadaada, waxaad sidoo kale bixin kartaa macluumaad tirakoobka (sida jinsi ama da ') naftaada, laakiin looma baahna.
Waxaan kaa codsaneynaa macluumaad foomkeena dalabka ah. Si aad nooga iibsato, waa inaad bixisaa macluumaadka xiriirka (sida magaca iyo cinwaanka dhoofinta) iyo macluumaadka maaliyadeed (sida lambarka kaarka deynta, taariikhda uu dhacayo). Macluumaadkan waxaa loo istcimaalaa ujeeddooyin biilal iyo in lagu buuxiyo amarradaada. Haddii aan dhibaato ku qabno socodsiinta amar, waxaan u isticmaali doonnaa macluumaadkan inaan kula soo xiriirno.
Waxaan wadaagnaa macluumaadka tirakoobka tirakoobka wada-hawlgalayaashayada iyo xayeysiinta. Tan kuma xirna macluumaad shaqsiyeed oo tilmaami kara qof kasta oo shaqsi ah.
Iyo / ama:
Waxaan u isticmaalnaa shirkad dhoofinta dibada ah si amarrada shixnadda, iyo shirkad kaararka deynta ah u dallacdo isticmaalayaasha alaabada iyo adeegyada. Shirkadahaan ma hayaan, la wadaagaan, ma keydiyaan ama uma isticmaali karaan macluumaadka shaqsi ahaan lagu garan karo ujeeddooyin kasta oo ka sareeya buuxinta dalabkaaga.
Waxaan la wadaageynaa koox kale si aan u siino adeegyo gaar ah. Markuu isticmaaleyaashu iska diiwaan geliyo adeegyadan, waxaan la wadaagi doonnaa magacyo, ama macluumaadka kale ee lala xiriirayo ee lagama maarmaanka u ah qofka saddexaad inuu bixiyo adeegyadan. Dhinacyadan looma ogola inay isticmaalaan macluumaadka shaqsiga lagu garan karo marka laga reebo ujeedada bixinta adeegyadan.
Waxaan qaadnaa taxadar si aan u ilaalino macluumaadkaaga. Markaad gudbiso macluumaad xasaasi ah websaydhka, macluumaadkaaga waa la ilaaliyaa labadaba khadka tooska ah iyo kan tooska ah labadaba.
Meelkasta oo aan ka aruurino macluumaadka xasaasiga ah (sida xogta kaarka deynta), macluumaadkaas waa la keydiyay oo si aamin ah ayaa naloogu soo gudbiyay. Waad ku xaqiijin kartaa tan adoo raadinaya astaan ​​quful xiran oo ku yaal salka hoose ee biraawsarkaaga, ama raadinaya "https" bilowga cinwaanka bogga internetka.
Inta aan adeegsaneyno sirta si aan u ilaalino macluumaadka xasaasiga ah ee lagu kala qaado internetka, waxaan sidoo kale ilaalinaa macluumaadkaaga qad la'aan. Kaliya shaqaalaha u baahan macluumaadka si ay u qabtaan shaqo gaar ah (tusaale ahaan biilasha ama adeegga macaamiisha) ayaa loo oggol yahay inay helaan macluumaad shaqsi ahaan lagu garan karo. Kombiyuutarada / serverka aan ku keydinayno macluumaadka shaqsi ahaan la aqoonsan karo waxaa lagu hayaa jawi aamin ah.
Waxaan u isticmaalnaa "cookies" boggan. Cookie waa gabal yar oo xog ah oo ku kaydsan dariiqa booqdaha goobta si ay nooga caawiso inaan kor u qaadno marin u helka bartayada iyo aqoonsiga soo noqnoqda booqdayaasha boggeena. Tusaale ahaan, markaan isticmaalno cookie si aan kuu aqoonsanno, uma baahnid inaad gasho eray sir ah wax ka badan hal jeer, taas oo waqtiga ku badbaadinaysa inta aad ku jirto bartayada. Kukiyada ayaa sidoo kale awood noo siin kara inaan raad-raacno oo aan bartilmaameedsanno danaha adeegsadayaasha si aan kor ugu qaadno qibradooda ku saabsan bartayada. Adeegsiga cookie sinnaba uguma xirna wax macluumaad ah oo shaqsi ahaan lagu garan karo oo ku saabsan bartayada.
Qaar ka mid ah shuraakadayada ganacsiga ayaa ku isticmaali kara cookies-ka bartayada (tusaale ahaan, xayeysiistayaasha). Si kastaba ha noqotee, ma lihin marin ama xakameyn karno kukisyadan.
Degelkan waxaa ku jira xiriiriyeyaal bogag kale. Fadlan la soco inaanan masuul ka aheyn waxyaabaha ku jira ama ku dhaqma waxyaabaha u gaarka ah boggaga kale. Waxaan ku dhiirigelinaynaa isticmaaleyaasheena inay ka digtoonaadaan markay ka baxayaan boggayaga oo ay akhriyaan bayaannada asturnaanta ee bog kasta oo kale oo ururiya macluumaadka shaqsi ahaan lagu garan karo.
Daraasado & Tartanno
Waqti-ka-toobadkeenna degelku wuxuu macluumaadka weydiistaa iyada oo loo maro sahan ama tartanno. Kaqayb galka sahamintan ama tartamadaani gebi ahaanba waa iskaa wax u qabso ah oo waxaad dooran kartaa inaad kaqeybqaadato iyo inkale sidaa darteedna aad shaaciso macluumaadkan. Macluumaadka la codsaday waxaa ku jiri kara macluumaadka xiriirka (sida magaca iyo cinwaanka dhoofinta), iyo macluumaadka juqraafi (sida zip code, heerka da'da). Macluumaadka xiriirka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu ogeysiiyo guuleysteyaasha iyo abaalmarinta la bixiyo. Macluumaadka sahaminta waxaa loo isticmaali doonaa ujeeddooyinka la socodka ama kor loogu qaadayo isticmaalka iyo ku qanacsanaanta boggan.
Mar alla markii wax ka beddelid lagu sameeyo ogeysiiska asturnaanta sheeg sida loo ogeysiinayo macaamiisha.
Qodobada kale ee Sharcigu u Baahan Yahay
Qodobbo kale oo badan iyo / ama dhaqanno ayaa looga baahan karaa sharciyada, heshiisyada caalamiga ah, ama ku-dhaqanka warshadaha. Adiga ayay kugu xidhan tahay inaad go aansato dhaqamada dheeraadka ah ee la raacayo iyo / ama waxa loo baahan yahay siidaynta dheeraadka ah. Fadlan fiiro gaar ah u yeelo Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Qarsoodiga ah ee Kalifoorniya (CalOPPA), oo badiyaa wax laga beddelo oo hadda ay ku jirto sharraxaadda shaacinta ee calaamadaha "Ha Raadsan".
Haddii aad dareento inaanan u hoggaansameyn siyaasaddan asturnaanta, waa inaad isla markiiba nala soo xiriirtaa emaylka gaarka ah ee ah emailka ah [email protected]